Pamwe, ndiwo mamiriro ebhizinesi redu. Real Estate vanhu vanofarira kutaura - vane hunyanzvi hwekukurukura, uye vanofarira kuita bhizinesi parunhare. Asi zvakare hunhu hwebhizimusi nhasi: vanhu vari kutsvaga, kubhurawuza nekudana kubva kumafoni avo sezvavanofamba munzira yekutenga. Zvakakosha kuti timu yedu yekushambadzira ine ruzivo rwekutevera, kuongorora uye kugadzirisa aya mafoni ari mukati, uye kuti timu yedu yekutengesa yakagadzirirwa kupindura mafoni anogona kushandurwa.
Isu takaisa mari mukati Inzwi reKushambadzira Izwi kuwedzera dura rekunzwisisa kutenderedza chiteshi timu yedu yekutengesa inoshandisa zvakanyanya. Iyi yekuwedzera data inobvumidza edu ekushambadzira uye ekutengesa zvikwata kuti zvishande zvinobudirira pamwe chete - vedu reps vanogona kutora mafoni akawanda uye kuwana kukosha kwakanyanya kubva kune yega yega, uye timu yedu yekushambadzira inogona kupa yedu mishandirapamwe yekutungamira iyo inoshandura parunhare.